Ndege nyowani kubva kuFort Lauderdale kuenda kuTurks neCaicos, San Jose, Costa Rica nePunta Kana, Dominican Republic
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Ndege nyowani kubva kuFort Lauderdale kuenda kuTurks neCaicos, San Jose, Costa Rica nePunta Kana, Dominican Republic
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Kufamba Nhau • Costa Rica Kupwanya Nhau • Dominican Republic Kuvhuna Nhau • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau
kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero
Fort Lauderdale kuenda kuTurks neCaicos, San Jose, Costa Rica nePunta Kana, Dominican Republic. Nyowani Sevhisi kuSouthwest Airlines.
ICaribbean inoda rubatsiro kana zvasvika pakushanya. IUS haina chinonakidza chinotakura Southwest Airlines Co. iri kuita chaizvo izvi kana nhasi vatanga kushanda nyowani sevhisi yepasi rose zuva nezuva kubva kuFt. Lauderdale-Hollywood International Airport (FLL) kuenda kuProvencenciales International Airport (PLS) mu VokuTurkey zveTurks Islands, nyika yevatakuri yechi11 yakashanda. Uye zvakare, Southwest® yakatanga sevhisi nyowani pakati payo South Florida gedhi kuFLL uye zvese zviri zviviri San Jose, Costa Rica(SJO), uye Punta Kana, Dominican Republic (PUJ), ichipa Vatengi mukana wekumira kubva Fort Lauderdale kunzvimbo gumi mu Latin America uye Caribbean.
“Nzira nhatu nyowani dzinounza kukosha kwekumaodzanyemba kwakadziva kumadokero kwevaFloridians vachitarisira kurova kumahombekombe muProvo inozivikanwa pasi rese Nyasha Bay, kukwira crater pa Poasgomo rinoputika pedyo Costa Rica's guta guru, kana kuva nevhiki isina hanya munzvimbo yekutandarira mu Punta Kana, ”Akadaro Steve Goldberg, Mutevedzeri Wemutungamiriri weSouthwest weOperations & Hospitality uyo anoshanda semutakuri Executive Sponsor we Florida. “Nekubatana kuri nyore kwe Orlando, Tampa, uye nemaguta akawanda kudunhu redu remumba, idzi nzvimbo dzepasi rese dzave kuwanika kuSouthwest.
Mukudyidzana ne Broward County, Maodzanyemba akadziva kumadokero anoenderera mberi nebasa rekushandura uye kuwedzera Terminal 1 kuFLL kuita nzvimbo yakavandudzwa ine magedhi ekuwedzera, kuongorora kwekuchengetedza, kubvumidza, uye kugona kugadzirisa pamuganhu. Maodzanyemba akadziva kumadokero akatanga mamwe mabasa epasirese kubva kuFLL munaJune 2017.
“Tiri kuisa mari mu Caribbean netarisiro ine tariro yezvekufamba nekushanya sezvo Moyo yedu ichiramba iine avo vachiri kusangana nematambudziko akakura, ”akawedzera Goldberg. Kutevera madutu e2017, Maodzanyemba akadziva kumadokero akabatana nevakuru vehurumende kuti vashande gumi nemaviri ndege dzisina kurongwa kuenda Pota Riko mukutsigira kwekuyamura nekutakura vanhu uye zvinodikanwa zvakanyanya. "Nepo kupora kweushingi kuchiri kuenderera, chinhu chakanakisa chingaitwe nevazhinji ikozvino kungotora zororo, kuita rwendo rwebhizinesi, uye kubatsira mukuziva kukuru kuti Caribbean adzoka mubhizimisi. ”